iSpy - 3G IP Cam (isekela ikhadi le-3G sim ne-Wifi) - Izixazululo ze-OMG
iSpy - 3G IP Cam (ukusekela i-3G ikhadi le-Wifi kanye ne-Wifi)
ISpy - Ukucaciswa kwekhamera ye-IP Security
I-3G wifi IP Camera CCTV Ikhamera engenantambo
Ukubeka iso ekhaya lakho kulula, ngisho nezinkulungwane zamamayela kude. Vele uxhume i-3G Wi-Fi home monitor Camera Camera (iSpy) bese uyishiya isebenza. Ungahlola nganoma yisiphi isikhathi nge-smartphone yakho ukuqapha indlu yakho futhi ungakhululeka ngokwazi ukuthi uma noma ngubani engena uzokwaziswa ngokushesha ngokubanjwa kohlaka lwabangenisi abathunyelwe kuselula yakho. Ngokuthula kwengqondo ungabheka ukuthi kwenzekani endlini ngokusebenzisa ukusakazwa kwevidiyo bukhoma kwe-720P. Noma ngabe amandla anqanyuliwe, ibhethri langaphakathi lilungele ukufika emahoreni ama-4 ukusetshenziswa ukuthola ukunyakaza okungajwayelekile / okusizwa ngezwi inzwa ye-PIR.
Ukusetha Okusheshayo Nokulula
Izinyathelo ezi-3 zokusebenzisa ikhamera. Landa i-APP → Bhalisa nge-imeyili yakho bese ungena ngemvume → Faka inkanyezi kukhamera bese uyifaka ku-APP.
Akukho ukucushwa komshini oyinkimbinkimbi namakhono ezobuchwepheshe adingekayo. I-magnétique base / wall mount ingakwazi ukubamba ikhamera kunoma iyiphi indawo ephahleni noma yamukele kunoma yimuphi unsimbi wensimbi.
I-3G ne-Wifi Iyatholakala
Iyahambisana nobuchwepheshe bamuva be-3G ne-Wi-Fi, ungafinyelela ukusakazwa kwevidiyo bukhoma noma okuqoshiwe kusuka noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi, usebenzisa izinhlelo zethu zamahhala ze-IOS nezinhlelo zokusebenza ze-Android.
Ifakwe isisekelo sikazibuthe, iSpy ingashintshwa futhi ilungiswe kunoma iyiphi i-engeli.
Ungakwazi ukukhuluma nanoma ubani ngokusebenzisa isikhulumi esakhelwe ngaphakathi nemakrofoni.
Ukuzwa komsindo / ukunyakaza
Thola izaziso uma umsindo noma ukuhamba kutholakala.
Ikhasi lemininingwane yomkhiqizo
I-iSpy CCTV Sim card video camera Gcina umbhalo walokho okujwayelekile, qaphela okungajwayelekile
Uma kwenzeka noma ngubani engena endlini yakho uzokwaziswa ngokushesha ngeselula yakho.
Beka ikhaya lakho efonini yakho, imini nobusuku
Izinto zingaphansi kokubhekwa ngisho nasebusuku.
Xhamela ikhamera engenantambo ye-3G / Wi-Fi yesimangqamuzana esikude
Abaqaphi abaningi abaphathi ngenhlelo eyodwa
Ngehlelo lokusebenza olulodwa, ungakwazi ukubuka ama-monitor amaningi angenawasekhaya.Kwakha abaqaphi abaningi njengoba uthanda, noma yikuphi okuthandayo, Hlala eduze nabathandekayo bakho
Gada ngefoni / pad / Isiphequluli
Ibhethri eyakhelwe ngaphakathi ilungele ukufika kwamahora we-4 'ngisho nalapho amandla enqanyuliwe.
Okuncane kodwa ecebile ku Izici
Ukubuka okuphelele kwe-3620 Ukubuka kwe-1 Namuhla